samedi, 15 mai 2021 11:04
Famaranana « The Voice France 2021 » : Miara-mitempo amin’i Marghe ny fon'ny Malagasy
Hotanterahina anio sabotsy 15 may 2021 alina ny famaranana ny fifaninanan-kira sy hatsaram-peo na « The Voice France 2021 » ao amin’ny fahitalavitra frantsay TF1. Efatra ireo mpifaninana tonga amin’ity dingana famaranana ity, ka anisany ilay tovovavy Malagasy, Margherita Davico (Marghe). Efa mpandray anjara amina fifaninanan-kira i Marghe na teto Madagasikara na tany Ivelany, ary izao hiatrika ny famaranana fifaninanan-kira “The Voice” ao amin'ny TF1 izao. Maro ny Malagasy naneho hevitra tamin’ny tambazotran-tserasera, mampirisika, mitsodrano ary mirary fahombiazana ho an’i Marghe. Miara-mitempo amin’i Marghe ny fon'ny Malagasy. Mandeha mivantana amin'ny TF1 amin'ny 9ora alina any Frantsa, 10ora alina aty Madagasikara. (Jereo Sary Tohiny)
vendredi, 14 mai 2021 18:45
Mark Zuckerberg : Feno 37 taona ity mpamorona ny facebook ity
Mark Elliot Zuckerberg no tena anarany. Ny taona 2004 no nahita masoandro ny facebook, izay noforoniny hifampizarana sy hifidianana sarin’ny mpianatra, fony izy nianatra tao amin’ny oniversite Harvard any Etazonia. Mankalaza ny tsingerintaona faha-37 nahaterahany izy androany. (Jereo Sary Tohiny)
Bob Marley : 40 taona lasa izay no nahafaty ity mpihira reggae malaza ity
11 may 1981 - 11 may 2021, 40 taona lasa izay no nahafaty an’i Bob Marley tany Miami – Etazonia. Aretina homamiadana no nahafaty aty. Teratany jamaikana izy, mpitendry, mpamoronkira sady mpihira, nivoy ny mozika reggae no tena nahalalana azy.